The Nutricle from Nutrispices
January 2021 - Issue 74
DO YOU KNOW ABOUT CARBON LABELLING?
Carbon labelling is the idea thataproduct should clearly show how much pollution it is responsible. Farming represent 14.5% of all greenhouse gas emission related to human activities. Life cycle assessment (LCA) studies have shown that feed production accounts for 70% of that contribution. End-users consumers are putting more and more pressure to manufacturers for reducing footprint. Improving the knowledge of the environmental impact of feed ingredients is fundamental to instigateapositive change.
ကာဗွန်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းဆိုသည်မှာထုတ်ကုန်တစ်ခုသည်မည်မျှပါတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းနိုင်သည်ကိုရှင်းလင်းစွာပြသတာ၀န်ယူခြင်းဖြစ်သည်။မွေးမြူရေးကဏ္ဍရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲတိုးတက်ပြုလုပ်ခြင်းတွင်ဤကိစ္စသည်သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ မှန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုအားလုံး၏ ၁၄.၅% သည်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းထုတ်လွှတ်သည့်ဓါတ်ငွေများဖြစ်သည်။ဘဝစက်ဝန်းအကဲဖြတ်ခြင်း (LCA) လေ့လာချက်များအရအစာထုတ်လုပ်မှုသည်ထိုထုတ်လွှတ်မှု့၏ ၇၀% ရှိသည်ဟုဖော်ပြသည်။ သုံးစွဲစားသုံးသူများသည်တိရိစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများကိုသူတို့၏ကုန်ပစ္စည်းများ၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုလျှော့ချရန်ဖိအားပေးမှုများပိုများလာသည်။အစာအာဟာရများထုတ်လုပ် ခြင်း၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပိုမိုသိရှိနားလည်ခြင်းသည်အပြုသဘော ဆောင်သောပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
The idea ofacomprehensive environmental Life Cycle Assessment (LCA) was conceived in the USA in the late 1960s/early 1970s. In 1969, the Coca Cola Company commissioned the first LCA study to examine the complete environmental impact ofapackage, focusing on sustaining the use of high value recyclable materials and reusable packages. In 1988, interest returned to solid waste, but this was quickly replaced byamore balanced concern about the areas of resource use and environmental emissions. In 1991, concerns over the inappropriate use of LCAs to make marketing claims by product manufacturers, led to the development of the LCA standards in the International Standards Organization (ISO) 14000 series.
ပါတ်၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာဘဝစက်ဝန်းအကဲဖြတ်ခြင်း (LCA) ၏အကြံဥာဏ်ကို ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်နှောင်းပိုင်း / ၁၉၇၀ ပြည့်နှစ်အစောပိုင်းတွင်အမေရိကန်၌စတင်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၉ ခုနှစ်တွင်ကိုကာကိုလာကုမ္ပဏီသည် တန်ဖိုးမြင့်သောပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောပစ္စည်းများနှင့်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောထုပ်ပိုးမှု့များအသုံးပြုခြင်းကိုရေရှည်တည်တံ့ရန်ဂရုစိုက်၍ပတ်၀န်း ကျင်ဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက် မှုများအား ဆန်းစစ် ရန်ပထမဆုံး LCA လေ့လာမှုကိုစတင်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၃ ခုနှစ်တဝိုက်တွင်ရေနံ အကျပ် အတည်း ကြောင့်စွမ်းအင်ဘက်သို့အာရုံပိုစိုက်ခဲ့ကြသည်။၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင်အစိုင်အခဲစွန့်ပစ် ပစ္စည်းများ ဘက်သို့ ပြန်လည်အာရုံစိုက်လာခဲ့ကြသည်။သို့သော်၎င်းကိုသယံဇာတသုံးစွဲမှုနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှု့များနှင့်ပတ်သက်၍မျှတခြင်းမရှိမှာကိုစိုးရိမ်ခဲ့ကြသည်။ ၁၉၉၁ခုနှစ်တွင်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများကစျေးကွက်ရပိုမိုရရှိစေရန်LCAsကိုစည်းမျဉ်းများ ကိုမသင့် လျော်စွာအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်မှုများလာသောကြောင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းအဖွဲ့ (ISO) 14000 စီးရီးများတွင် LCA စံချိန်စံညွှန်းများတိုးတက်ချမှတ်လာခဲ့သည်။
ISO လမ်းညွှန်ချက်များသည်ကုန်ကြမ်းများမှကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း၊ များတွင်ဖြစ်နိုင်သမျှပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းမှတစ်ဆင့်ကုန်ပစ္စည်း(သို့မဟုတ် ၀န်ဆောင်မှု)တစ်ခုထုတ်လုပ်ခြင်းစက်ဝန်းကိုဆန်းစစ်ရန်နည်းလမ်းများရှင်းလင်းစွာသတ်မှတ်ထားသည်။
အဆင့်တိုင်းအတွက်သွင်းအားစုများ(ကုန်ကြမ်းနှင့်စွမ်းအင်များ)နှင့်ထွက်ကုန်များ(အစိုင်အခဲစွန့်ပစ် ပစ္စည်းများကိုလေ၊ရေ၊မြေဆီလွှာများအပေါ်ထုတ်လွှတ်မှုအရ)ကိုစာရင်းပြုစုပြီးပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများသို့ပြောင်းလဲသည် (ပုံ ၁) နှင့် LCA အညွှန်းကိန်းများကသရုပ်ပြသည်။
ယခင်ကမျိုးစိတ်များကာကွယ်ခြင်းနှင့်လေ၊ရေတို့၏မြှင့်တင်နေရခြင်းစသည့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများသည်ကမ္ဘာကြီးရင်ဆိုင်နေရသောအဓိကပတ်၀န်းကျင်ဆိုင်ရာပြဿနာများဖြစ်သည်။ယနေ့ခေတ်တွင်အခင်းအကျင်းအမျိုးမျိုးနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရှုထောင့်အကြားဆက်စပ်မှုများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့်ပိုမိုစနစ်ကျသောချဉ်းကပ်မှုများလိုအပ်သည်။FAOမှသက်ဆိုင်သူများစွာပါ၀င်သည့် LEAP(Livestock Environmental Assessment and Performance Partnership) (မွေးမြူရေးပတ်၀န်းကျင်ဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်မိတ်ဖက်မှု)ကိုစတင်ခဲ့သည်။ သက်သေအထောက်အထားအခြေခံသည့်မူဝါဒအစီအမံများနှင့်စီးပွားရေးမဟာဗျူဟာများကိုပုံဖော်နိုင် ရန်အတွက်မွေးမြူရေးထွက်ကုန်အဆက်မပြတ်စေရေးနှင့်သဘာပတ်၀န်းကျင်ပျက်စီးခြင်းကိုနားလည် ရန်လမ်းညွှန်နှင့်နည်းစနစ်ကိုပြဌာန်းခဲ့သည်။
An ingredient coming fromaprocess of fermentation or trituration likeasynthetic amino-acid or an oil will haveahigher impact on climate change thanacereal. A soybean imported from Brazil will haveastronger CO2 impact thanalocal one because of transportation. Palm oil associated to deforestation would be less favor thanacertified one (7,000 vs 500 kg equivalent CO2).
အချဉ်ဖောက်ခြင်းနှင့်triturationနည်းဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသောအစာကုန်ကြမ်းများအထူးသဖြင့်လူလုပ်အမိုင်နိုအက်ဆစ်များသည်နှံစားသီးနှံထက်ကာဘွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ထုတ်လုပ်မှု့ပိုမိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ဘရာဇီးမှတင်သွင်းသောပဲပုပ်သည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြောင့်ဒေသပဲပုပ်ထက်CO2 ထုတ်လွှတ်ပိုမိုသက်ရောက်နိုင်သည်။သစ်တောပြုန်းတီးမှုနှင့်ဆက်နွယ်သည့်စားအုန်းဆီစိုက်ပျိုးမှု့သည် (၇၀၀၀ နှင့် ၅၀၀ ကီလိုဂရမ်နှင့်ညီမျှသော CO2) ပိုမို၍ အလေးပေးအာရုံစိုက်မှု့နည်းနိုင်သည်။
အောက်ဖော်ပြပါပုံ(၂)သည်စံစနစ်ဖွဲ့စည်းမှုအပေါ် အခြေခံ၍ တိရိစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်မှု့များ၏ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအပေါ်ထိခိုက်မှု့လက္ခဏာကိုသရုပ်ဖော်သည်။ ရလဒ်များအရဓာတ်မြေသြဇာအသုံးပြုမှုကြောင့်သီးနှံနှင့်ဆီထွက်သီးနှံ (စုစုပေါင်းအစာကျွေး မှုစုစုပေါင်း၏ ၄၈% နှင့် ၂၈% အသီးသီး) သည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု့လက္ခဏာ (EF) ကိုအများဆုံး ဖြစ်ကြောင်းပြသသည်။မြေအချဉ်ပေါက်ခြင်း၊ရာသီဥတုပြောင်းလဲစေခြင်း၊ ရေကန်များထဲတွင် ရေညှိရေဩဇာများပြားလာခြင်း၊စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်များခြင်း၊ ပိုးသတ်ဆေးများ တို့ကြောင့်ဖြစ်စေသည်။ ၎င်းတို့၏ထုတ်လုပ်မှုအတွက် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကွန်ယက် (ပုံ ၂) ။
အနည်းလိုသတ္တုဓာတ်သည်အစာထုတ်လုပ်မှု့စုစုပေါင်း၏ ၀.၇၈% သာရှိသော်လည်း၎င်းတို့သည် မြေဆီလွှာများနှင့်ရေများသို့ထုတ်လွှတ်သည့်အခါသတ္တုအဆိပ်သင့်မှုအလားအလာမြင့်မားခြင်းနှင့်အတူပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲမဟုတ်သောသတ္တုအရင်းအမြစ်ကုန်ခမ်းခြင်းများဖြစ်ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။တိရိစ္ဆာန်အစာအာဟာရအတွက်အသုံးပြုနေသောအနည်းလိုသတ္တုများရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲစွာအသုံးပြုနိုင်ရန်၎င်းထည့်သွင်းသုံးစွဲမှု့ပမာဏအရေးပါကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူသူတို့၏သက်ရောက်မှုများကိုအကဲဖြတ်ရာတွင်နည်းစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုများရှိသေးသည်။မည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေတိုးတင်လာသောနည်းစနစ် များကြောင့်
(၁) အစာထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် မိမိတို့၏တာဝန်ယူမှု့အဝန်းအဝိုင်းကိုကုန်ချောထုတ်လုပ်သည့်နယ်အထိတာဝန်ယူခြင်း ဆိုလိုသည်မှာတိရိစ္ဆာန်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၏သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု့EF ကိုတွက်ချက်ခြင်း
SUMINAPP စီမံကိန်းဟုခေါ်သည့် EU H2020 (www.suminapp.eu) မှရန်ပုံငွေထောက်ပံ့သော စီမံကိန်းတွင် စမ်းသပ်မှုရလဒ်များမှရရှိလာသော LCA စည်းမျဉ်းသစ်ကိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အဆိပ်အတောက်လက္ခဏာများအတွက် အစာမှစွန့်ပစ်အညစ်အကြေး အထိ ဂေဟဗေဒဆိုင်ရာ အကဲဖြတ် ဆန်းစစ်မှုနည်းလမ်းသစ်ကို အသုံးပြုလာကြသည်။
Some feed producers already created one additional dimension in their formulation matrix to include the LCA score of ingredients and monitor the LCA index of the recipe. That approach enables them to optimize their diets not only on the economical aspect but the ecological one. A standard gestation diet brings around 380kg equivalent CO2 / ton of feed but it goes up to 560 for pig finisher diet and even 620kg CO2 for lactating diet. The reduction of this level of footprint through formulation will increase diet cost but through proper communication, we can expect consumers to pay higher price for “ecological” meat.
အချို့သောအစာထုတ်လုပ်သူများက LCA ရမှတ်များထည့်သွင်းရန်နှင့်စာရွက်၏ LCA အညွှန်းကိန်းနှင့်၎င်းတို့၏အစာသုံးရာမှထွက်လာသောအညစ်အကြေးအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်လာကြသည်။ထိုချဉ်းကပ်မှုကသူတို့၏အစားအစာများကိုစီးပွားရေးရှုထောင့်သာမကပတ်ဝန်းကျင်ဂေဟစနစ်အပေါ်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ပေးသောကြောင့်ကောင်းမွန်သောစီးပွားရေးပုံရိပ်များရရှိလာကြသည်။ ပုံမှန်ဝက်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အစာ တစ်တန် သည် ၃၈၀ ကီလိုဂရမ်နှင့်ညီမျှသော CO2 / ကိုလေထု ၀န်းကျင်ထဲသို့ထုတ်လွှတ်သော်လည်းဝက်ကြီးနောက်ဆုံးအစာအတွက် ၅၆၀ကီလိုသည် CO2 ၆၂၀ ကီလို အထိထုတ်လွှတ်သည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ ဖော်မြူလာမှတစ်ဆင့်ဤ CO2ထုတ်လွှတ်မှု့ကို လျှော့ချခြင်းသည်အစာကုန်ကျစရိတ်ကိုမြင့်တက်စေမည်ဖြစ်သော်လည်းကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးဖြင့်စားသုံးသူများသည်“ ဂေဟစနစ်ကိုထိန်းသိမ်းသော”အသားအတွက်စျေးကောင်းကိုပေးလိမ့် မည်ဟုမျှော်လင့်နိုင်သည်။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မကြာမီLCAရမှတ်များကိုအိတ်တံဆိပ်နှင့်စူပါမားကက်များရှိအသားတံဆိပ်များ ပေါ်တွင်စတင်မြင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ ထို့သိုဖြစ်ပျက်လာပါက LCA ရမှတ်သည်အစာထုတ်လုပ် သူများအကြားကွဲပြားခြားနားမှု၏အရေးကြီးသောသတ်မှတ်ချက်ဖြစ် လာလိမ့်မည်။
In April 2020, Quorn,aUK food supplier, announced plans to introduce “farm to shop” carb on labels for 30 of its bestselling products, including its mince, crispy nuggets and sausages. They expect such practices to develop among producers in order to enable benchmark between labels.
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်Aprilပြီလတွင်ယူကေအစားအသောက်ထုတ်လုပ်သော Quorn ကုမ္ပဏီ သည် ဝက်ကျိတ်သား၊ အသားလုံးကျွတ်ကြော်နှင့်ဝက်အူချောင်းများအပါအ ၀ င် ၎င်း၏အရောင်းရဆုံး ထုတ်ကုန် ၃၀ အတွက်ကာဗွန်တံဆိပ်များကို“ မွေူမြူရေးခြံမှစျေးသို့” ကိုမိတ်ဆက်ရန် အစီအစဉ်ကိုကြေငြာခဲ့သည်။ သူတို့ကတံဆိပ်များအကြားအခြေခံစံနှုန်းကို ထိန်းသိမ်းခြင်းနျင့်ပုံရိပ် ကောင်းနိုင်ဖို့ထိုကဲ့သို့သောအလေ့အကျင့်ကိုထုတ်လုပ်သူများအကြားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့မျှော်လင့်ထား လာကြသည်။
ပြင်သစ်တွင် ကုမ္ပဏီများအားကူညီရန်Eco-scoreဟုခေါ်သောအထောက် အကူပြုစံအသစ် တစ်ခုကိုဖန်တီးထားသည်။ ၎င်းတို့သည် LCA အညွှန်းကိန်းအရ A မှ D မှအမျိုးအစား ၄ ခုကို သတ်မှတ်သည်။ ထုတ်ကုန် ၂၄၀,၀၀၀ ကျော်အသိအမှတ်ပြုထားပြီး ဖြစ်သောဤစံ သည်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်သုံးစွဲသူများအကြားလူကြိုက်များလာသည်။
အကယ်၍ သင်သည်ထိုအကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ဝင်စားပါကဆွေးနွေးရန် ကျွန်ုပ်တို့ ထံဆက်သွယ်ရန်တွန့်ဆုတ်မနေပါနှင့်ကျွန်ုပ်သည်စီမံကိန်းရည်မှန်းချက်နှင့်နည်းနာကိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ရန်သင့်အားအကူညီပေးပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အနည်းလိုသတ္တုအာဟာရများကိုထုတ်လုပ်သောကုမ္ပဏီသည်ဥရောပတွင်ထိုလုပ်ငန်းစဉ် တွင်အကြီးအကျယ်ပါ၀င်ခဲ့ပြီးသူတို့၏ကျွမ်းကျင်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက် တန်ဖိုးရှိနိုင်သည်။
Click here to review past months Nutricles
Copyright © 2021 Nutrispices, All rights reserved.
Our mailing address in France is:
1, rue du chant des vagues
26/55, Nanglin chi road, Thung Mahamek,
Our mailing address in Myanmar is:
No. 934, Ground Floor, Thila 11 Street, Ward 4,
South Okkalapa Township, 11091, Yangon, Myanmar